Enwere ụzọ kachasị mma iji bulie PageRank na backlinks m?
E nwere ọtụtụ atụmatụ dị irè ugbu a nke a pụrụ iji mee ka ọbụla peeji nke PageRank ma ọ bụ blog nke ọ bụla website ma ọ bụ bloglinks. Ma tupu anyị amalite, ka anyị chee ya ihu - ị pụghị n'ụzọ nkịtị "nyochaa" gị PageRank dị na backlinks, n'agbanyeghị otú tricky ma ọ bụ nke ọma ha nwere ike ịbụ. N'ezie, gị na profaịlụ backlink na-anọchite anya isi ihe dị oke mkpa mgbe ọ na-abịakwute mmetụta dị nfe nke na-emesị kpebie ebe nrụọrụ weebụ gị.Otu n'ime ihe ndị ọzọ isi ụlọ ọrụ ọchụchọ dị ka Google, bụ ndị na-esonụ: permalinks onwe ha, isi isiokwu ebumnobi, ọdịnaya pụrụ iche dị mma, na ihe ndị ọzọ nke weebụsaịtị ndị na-adịchaghị ala na SEO. Ịlaghachi azụ - ọ gaghị ekwe omume ịmezi PageRank gị na backlinks ozugbo - fotos profesionales de personas. Ma ọrụ ahụ ka ga-emezu, nyere gị na ị dị njikere na njikere iji ndidi na-arụ ọrụ n'ogologo oge gị. N'okpuru ebe a bụ ma eleghị anya ịbịaru ụzọ dị mma iji jikọta ụlọ nke nwere ike inye aka na ọkwa elu gị dị elu na Google.
Ka m nye gị okwu nlezianya ikpeazụ - - agbalụ iji bulie PageRank na azụmaahịa backlinks. Ya mere, nke a bụ ihe a ga - eburu ụzọ tụlee:
Lekwasị anya na Ogo, karịa Ngụba
Isi echiche na - eme ka ọdụm nke SEO na - ịkụ nzọ na àgwà naanị. N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, ebumnuche zuru ụwa ọnụ nke SEO bụ iji nweta nkwụsị siri ike na nke na-adịte aka maka mgbasa ozi n'ịntanetị na SERPs. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na ndị webmasters novice na-eche nsogbu nsogbu na-eche ihu na njikọ njikọ. Ana m ekwupụta na ha na-ebute ụzọ dị ukwuu, na olileanya siri ike na ịhapụ nnukwu mkpọ backlinks n'ebe ahụ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ha n'ozuzu na-eto eto. Mana ha na-ezighi ezi n'ihi na inwe njikọ dị ala ma ọ bụ njikọ na-abaghị uru ọ bụ naanị maka nzube SEO. N'ezie, enwere ohere dị ukwuu iji nweta onwe gị nnukwu ụgwọ ọrụ ogo, kama ọganihu. N'ọnọdụ kachasị njọ, ihe niile nwere ike ịkwụsị na nyocha.
Njikọ n'ime Niche gị ma ọ bụ ọrụ azụmahịa
Emela ihe ọjọọ a, dịka m mere ọtụtụ afọ gara aga. N'ezie, m na-aga ụzọ na-ezighi ezi nke na-eweghachite backlinks na blog m - naanị ijikọta na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla a pụrụ ịdabere na ya ka m hụrụ na ọ dị mma iji emeso ndị ọzọ ihe.Ime nke a, ihe ka ọtụtụ n'ime azụlinks m ọhụrụ e mepụtara emeghị ka ọ dị mkpa - ọ bụghị na ha nile ka e kere n'ime nchịkwa ziri ezi. N'ihi nke a, enwere m oge buru ibu na mgbalị - nanị iji mebie inwe enweghị mmeri ọ bụla na PageRank site na backlinks. Nke ahụ bụ ihe mere tupu itinye aka na nkwurịta okwu na mkparịta ụka nke isiokwu, m na-atụ aro ka ị nyochaa ego abụọ na ebumnuche ndị ezubere zuru ezu na niche gị ma ọ bụ na-anọ n'ime otu ụlọ ọrụ azụmahịa.
Na - edozi isiokwu nyocha iji mee ka ndị na - agụ akwụkwọ dị mma
Ọfọn, ọ dịghị mkpa ikwu na ọdịnaya bụ eze. Ihe niile gbasara SEO na-agbanyegharị gburugburu isiokwu dị mma na nyocha nhazi nke ọma. Otú ahụ ka ọ bụla backlink na profaịlụ gị website, ma ọ bụ na ọ bụ ihe arịlịka ederede iji zie ezi. N'ụzọ dị mwute, a na-elegharakarị usoro ịmepụta nchọpụta mkpokọta na-emetụta. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tụlee arịda arịlịka njikọ gị nke ọma dị ka o kwere mee - ọ dịkarịa ala na-eji AdWords ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ịchọta ihe ndị ọzọ gbasara nchọpụta ihe. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ekwusi ike na ị na-ejikọta ihe na-ezighị ezi n'ihi na enweghị mmasị ya na ọchụchọ ahụ. Naanị jide n'aka na ị na-aga n'ihu ma na-agbaso ihe niile gbasara isi ihe gbasara ọchụchọ na ihe ndị ọzọ. Cheta na ihe odide abụọ yiri yiri yiri arịlịka nwere ike ịnye njikọ na njedebe zuru oke nke okporo ụzọ, n'ihi ya, ọ na-emetụta PageRank n'ụzọ na-adịgide adịgide.